एक स्कूटर कसरी चयन र हावा संग सवारी?
स्कूटर र दुवै बच्चाहरु र वयस्क सवारी। धेरै परिमार्जन गर्न धन्यवाद, तिनीहरूले दृढ आधुनिक जीवनमा निहित छन्। तिनीहरूले प्रकाश र बलियो मिश्र धातु को एक किसिम ले छन्, तिनीहरूले दुई पाँच किलोग्राम को एक वजन छ। भित्र इलेक्ट्रनिक्स र क्षमता संग उत्पादन केही डिजाइन एमपी -3 ढाँचामा संगीत सुन्न। यस लेखमा एक स्कूटर, छनौट गर्दा भन्दा चयन गर्न कसरी केही निर्देशन प्रदान गर्दछ।
यो हल्का वाहन तीन समूह विभाजन गरिएको छ:
उत्पादनहरु तिपहिया साइकिलें।
polyurethane पाङ्ग्रा संग मोडेल।
ठूलो पाङ्ग्रा संग संस्करण।
यसलाई स्थिर छ किनभने, र बच्चा, जमीन बन्द खुट्टा धक्का, व्हील नियन्त्रण र सुस्त सिक्न तीन पाङ्ग्रा संग स्कूटर राम्रो छ। यो जहाँ तपाईं शरीर नियन्त्रण र सन्तुलन राख्न सक्षम छ दुई-wheeled मोडेल, गर्न संक्रमण लागि राम्रो तयारी छ। Trehkolesniki एक वर्षीया बच्चाको लागि पहिले नै खरिद गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले उज्ज्वल, Pestryaev कार्टून वर्ण वा छन् दन्तिये देखि वर्णहरू। स्कूटर सामान टोकरी, जो एक पैदल छोराछोरीको खिलौने लागि बाहिर राख्न सकिँदैन माउन्ट। सबै भन्दा लोकप्रिय निर्माताहरु - सडक धावक, Korshun, Maxi माइक्रो।
यो बच्चा को लागि एक स्कूटर कसरी चयन गर्न जान्न महत्वपूर्ण छ, त्यसैले त्यो सुरक्षित थियो:
यो तल पर्ची संग रबर स्टीयरिंग ह्यान्डल, टिकाउ धातु फ्रेम र मंच डिजाइन प्राप्त गर्न मनमोहक छ।
को बच्चा सिकेका छ रोक्न एक ब्रेक एक मोडेल चयन गर्न राम्रो।
वाहन अर्को केही वर्ष बन्न रूपमा, एक उचाइ-समायोज्य स्टेरिड़ चयन गर्न महत्त्वपूर्ण दुई-wheeled। फ्रेम आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, एल्यूमीनियम बनेको हुनुपर्छ।
तर कसरी polyurethane पाङ्ग्रा एक स्कूटर चयन गर्न?
एक कम वजन छ।
भण्डारणको लागि संकुचित।
स्टेरिड़ 50 100 सेमी।
यसलाई कुनै पनि उचाइ समायोजित गर्न सकिन्छ।
परिवहन वेग व्हील को व्यास उच्च, ठूलो छ।
तपाईं नरम पाङ्ग्रा (76A बारे कठोरता) थप सहज संग मोडेल मा सवारी भने, तर तिनीहरूले वेयर र आंसू को एक उच्च डिग्री छ। Stiffer polyurethane पाङ्ग्रा असमान सतहहरु मा यात्रा गर्न असुविधाजनक छन्, तर तिनीहरू नरम भन्दा बढी टिकाउ छन्। polyurethane बनेको पाङ्ग्रा लागि इष्टतम कठोरता - 78a।
यस्तो डामर रूपमा मात्र चिल्लो कोटिंग मा स्केटिङ लागि उपयुक्त।
यो बेयरिंग रक्षा गर्न चिस्यान, पानी, बच्न महत्त्वपूर्ण छ।
ठूलो पाङ्ग्रा र inflatable टायर एउटा स्कूटर चयन गर्न कसरी सुझावहरू
उत्कृष्ट कुनै पनि सडक र सबै मौसम अवस्थामा क्रस-जस्तै।
एक उच्च गति विकास गर्ने क्षमता।
अगाडि र पछाडिको ब्रेक उपस्थिति (को ब्रेक मात्र पछाडिको को छोराछोरीको संस्करणमा)।
ट्रंक उपस्थिति (केही embodiments मा)।
माइनस एक: आकार र वजन। डिजाइन यसलाई जोडेको छैन गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो छ।
Skutering - यो के हो?
र हामी पनि skutering रूपमा खेल आए। चरम र शानदार स्टन्ट को प्रशंसक तपाईं यो खेल मा के र चाल प्रकार खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य मोडेल देखि स्टन्ट लागि फरक स्कूटर के हो?
किनभने उनीहरू सामान्य भन्दा अन्य भार लागि बनाईएको हो मतभेद महत्वपूर्ण। तिनीहरूले सवार एक तेज बारी, स्पिन, आफ्नो अक्ष वरिपरि बाउन्स बनाउन। सबै चाल उच्च गति मा गरेको छन्। त्यहाँ जस्तै चाल मोडेल, को एक नम्बर हो:
छुरा चरण दुई DIRTSCOOT।
छुरा चरण दुई यूहन्ना Radtke।
यी र स्कूटर अन्य प्रकार विभिन्न अवस्थामा र फरक सतहहरु मा पेशेवरों द्वारा परीक्षण छन्।
अब तपाईं सामान्य मामलामा थाहा छ, कसरी एक स्कूटर चयन गर्न। खुशी साथ सवारी!
हल र सिलाई पर्दे आफैलाई लागि Pelmet
माटोको Hob: फाइदा र बेफाइदा। समीक्षा मालिक
एक बोतल मा इन्द्रेणी सबै रंग - पुछ्ने कागज मा
पातलो corset: विवरण, समीक्षा
मुद्रा व्यापार तथ्याङ्क को प्रयोग। मानक विचलन
सूर्य कसरी उपयोगी कार लागि अंधा?
गाइड हत्यारे सिद्धन्त2- सत्य। खेल Aassassins सिद्धन्त। Assassins creed 3
एक सुगा टायर कसरी बनाउने वा toucan गर्न?
कसरी 40 वर्ष मा एक महिला लुगा गर्न? कसरी 40 वर्ष मा एक महिला लुगा गर्न?
"Monural" - analogues। राम्रो छ - "Nolitsin" वा "Monural"? समीक्षा
शास्त्रीय गिटार यामाहा C40: समीक्षा